समाज रुपान्तरणको युग | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
समाज रुपान्तरणको युग
ऐन कानून नभएर आजको युगमा समाज राष्ट्र गतिशिल हुन सक्तैत । सामाजिक व्यवहारका क्रममा परम्परा कथित धार्मिक मान्यताहरुले त्यत्तिकै जरा गाडेको स्थिति छ । कानून र परम्पराहरु बीच अन्तर विरोध मात्र होइन कतिपय अवस्थाहरुमा यो दण्डनीय पनि हुन सक्छ । ऋषी पंचमी तीजको अन्तिम दिन हिन्दु सम्प्रदायले श्रद्धाभक्ति पुर्वक मनाए भनेर सञ्चार माध्यमहरु नै प्रसारित गरी रहन्छन् । दशै तिहार पनि क्रमशः आउदै छन्, खसी बोका रांगा आदि पशुपंक्षीहरुको हत्या बलीका नाममा लाखौंको संख्यामा भित्र्याइदै गर्छन । पशुपंक्षी सम्बन्धित ऐनमा क्रुरता प्रदर्शन गर्न नहुने लगायतका विविध व्यवस्था ल्याईएका छन् । छाउपडी प्रथा दण्डनीय मानिएको छ । यसका लागि अभियान नै सञ्चालित हुने गरेका छन् । विकृति हटाउनु रुढीबादी परम्परा अन्त्य हुनु राम्रो सकारात्मक मान्नु पर्दछ । महिलाहरुका लागि स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया हो । देह भित्रका विकारहरु त्याग्न प्रकृतिले नै मलमुत्र, कफ पसिनाका रुपमा विसर्जन गर्ने व्यवस्था गरी दिएको छ । विशेष आवश्यकताका आधारमा महिनावारी पनि स्वभाविक प्रक्रिया भित्र नै पर्दछ । स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सिनेटरी प्याड आदि पनि छन् स्वच्छता राख्न अनिवार्य पनि हो । कानूनमा छाउपडीलाई दण्डनीय मानेको छ, यस्तो स्थितिमा कथित धार्मिक मान्यतामा आधारित ऋषी पञ्चमी त महिनावारी कै विषयमा आधारित छ । अनेक धार्मिक पर्वहरुमा बली प्रथा कायम नै छ ।
छाउपडीका नाममा महिलाले दुःख पाउनु हुन्न त्यसो भएमा सजाय हुने व्यवस्था पुजनर्जागरणको नै झलक हो । तर सरसफाई स्वच्छता नै नराखी जथाभावी हुन लाग्यो भने एउटा अतिवाट अर्को तर्फ जानु पुनरजागरणको परिभाषा भित्र पर्न सक्तैत तर यसकै नाममा परम्पराहरुको मान्यतालाई धार्मिक आवरण भित्र ल्याउनु पुरातन सोच भन्नै पर्दछ । जातक पैदा भएमा सरसफाई अनिवार्य हुन्छ तर यसमा पनि जथाभावी हुन लागे दुष्परिणाम ल्याउन सक्छ । महिलाहरुले पतिको दिर्घायुको कामना गर्दै ब्रत बस्ने अरे, मेमहरुका एनजीओ. यसलाई कुन रुपमा ग्रहण गरी रहेका होलान ? आज पति पत्नि बीचका सम्बन्ध हाम्रा धार्मिक मान्यता अनुरुप पवित्र पार्न नै छन्, अर्धागिनी नै हुन भनि कति संख्याले आत्मसात गरेका होलान ? एक महिनाको स्वस्थानी ब्रत उपवास गरेर नारी जातिले निर्वाह गर्छन अव स्वस्थानी कथा सुन्नै पर्ने त्यसमा भएका कथित धार्मिक बृतान्तहरुमा शिवलाई धुर्त ७ वर्ष कि अवोध गोमालाई ७० वर्षको शिवशर्मा भएर गर्भिणी बनाई देह त्याग गर्ने, भगवान भनिएका विष्णुलाई सति बृन्दाको सत्य डगाई बलात्कार गर्नु पनि पाठ कै रुपमा पुजित हुने त्यसलाई पनि धर्मको नाम दिएर जवरजस्तीकरणी अनमेल विवाह पाखण्डलाई कानूनले दण्डनीय बनाई सकेको छ । एक समय थियो लोग्ने मरेमा स्वास्नीले नचाहेर पनि सति जान पर्ने त्यसलाई पनि धार्मिक परम्परा नै मानिन्थ्यो । युग परिवर्तन सँगै त्यो इतिहास भईसक्यो हाम्रो सनातन परम्परा मान्यता भइसक्यो हाम्रो सनातन परम्परा मान्यताहरुलाई केही पाखण्डीहरुले अनाहकमा नचाहिदा विषय घुसाएर महान आध्यात्मिक दर्शनको मौलिकता स्वार्थवस नष्ट पार्ने काम गरे । ब्रतबन्ध आदि कर्मकाण्डमा भीक्षाटन गर्ने भनि अलख जगाउने जस्ता हास्यास्पद अनि छोरा जन्मे बाबुलाई दुबो हाल्ने घृणास्पद परम्परा जीवित रही आएकाले समाज विकृत भएको हो । आस्थाका केन्द्र मन्दिरहरुमा रकम दिएर पाठ पढाउने पण्डा पुजारीहरुले विना कारण महिमा मण्डित भई रहने त्यस्तै कर्मकाण्डका नाममा श्राद्ध गर्ने अरे, जीवन छदा हेला दुःख दिने मरेपछि ऋषिहरुलाई पोषित पार्दै दान दक्षिणा दिने कथित तिर्थहरुमा धर्मका नाममा लूट ? टाढाको के कुरा पशुपति दर्शन चाणै गराउन ठूलो भेटी दिनुपर्ने व्यवस्था राज्यले नै गरेकै हो ।
यी तमाम परिप्रेक्षको गहन विश्लेषण अनुसन्धान हुनै पर्दछ । अनमोल हिन्दु अध्यात्मिक दर्शनलाई धुर्त पाखण्डीहरुले विद्रुत बनाई दिए, यस भित्रको मणि खोज्नु पर्ने समय आएको छ । मन्दिरहरुमा श्रद्धाले होइन परम्पराले बाधिएर जानु कुनै महत्व राख्न सक्तैन त्यसैले समाज रुपान्तरणका लागि अष्टाङ्ग योग जस्ता आत्मबोध गराउन सक्ने सार्वभौम सत्यमा रुपान्तरण गरौं यही आजको आवश्यकता लाग्छ । क्रमशः
← साहित्यिक क्षेत्रको विकास
ऐन नियम कानून सबैले मान्नु पर्छ →